Ahoana no fomba fisorohana ny Ad fraud.txt sy Ads.cert? | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 24, 2018 Sabotsy, Martsa 24, 2018 Douglas Karr
Amin'ny indostria $ 25 miliara, 6 XNUMX tapitrisa dolara amin'ny hosoka tsy azo odiana… fandrahonana mivantana ho an'ny indostria. Ireo statistika ireo dia avy amin'ny fanadihadiana nataon'ny Fikambanan'ny mpanao dokam-barotra nasionaly, izay niara-niasa tamin'ny orinasa fiarovana nomerika WhiteOps. Ny fifantenana mandeha ho azy amin'ny fampiasana sehatra fanaovana dokambarotra fandaharana dia tsy nanampy. Raha azonao atao ny manamboatra algorithma amin'ny alàlan'ny programa dia azonao atao koa ny manisy rafi-drafitra hanintonana ny dokam-barotra.
Mindrana amin'ny indostria hafa, toy ny mailaka, IAB Labs dia namolavola ny famaritana Ads.txt. Manantena ny hanakana ny hosoka amin'ny alàlan'ny famoronana index an'ny mpivarotra sy mpanonta nahazo alalana ny Ads.txt.
Inona ny Ads.txt?
Ads.txt midika hoe Mpivarotra nomerika nahazo alalana ary fomba tsotra, malefaka ary azo antoka azon'ny mpanonta sy ny mpaninjara ampiasaina hanambarana ampahibemaso ireo orinasa nomeny alalana hivarotra ny lisitra nomerika ananany. Amin'ny alàlan'ny famoronana firaketana ampahibemaso an'ny mpivarotra nomerika nahazo alalana, ny ads.txt dia hamorona mangarahara bebe kokoa amin'ny rojom-panolorana lisitra, ary hanome ny mpitantana ny fanaraha-maso ny fitehirizan'izy ireo eny an-tsena, ka ho sarotra kokoa ho an'ireo mpisehatra ratsy mahazo tombony amin'ny fivarotana fanisana sandoka manerana ny tontolo iainana. Rehefa mandray ads.txt ny mpanonta dia ho hitan'ny mpividy mora kokoa ny mpivarotra nomerika nahazo alalana ho an'ny mpamoaka mpandray anjara iray, ahafahan'ny marika matoky fa mividy ny lisitr'ireo mpanonta tena izy.
Afaka mahita ny ahy ianao ads.txt fisie, izay ahitako LiveIntent (sehatra doka mailaka ataonay) sy Google Adsense (tambajotran-doka asehoanay) voatanisa.
Inona ny Ads.cert?
Ads.txt dia fomba tsara iray manome alalana fametrahana doka amin'ny tranokalanao. Na izany aza, tsy manamarina ny loharanon'ilay doka. Ads.cert dia eo an-dalam-pandrosoana mba hanaovana izany. Mitovy amin'ny fomba fiasan'ny teknolojia blockchain, Ads.cert dia samy hiantoka fa manome alalana ny fametrahana doka ianao, ary koa manamarina ny Demand Side Platform (na DSP).
Ads.cert, miaraka amin'ny Ads.txt dia hiantoka:
Mpiara-miasa dia alalana mivarotra.
Ny lisitra dokam-barotra dia marina.
Ny lisitra dokam-barotra dia tsy novaina.
Misy dia misy fanontaniana raha misy rafitra na ity rafitra ity afaka mandrindra fangatahana sy angona be dia be amin'ny fotoana ilana azy. Mbola ho hita eo ihany.
Ity misy topy maso amin'ny masontsivana avy amin'ny Smart AdServer, Ady amin'ny ady amin'ny fenitra: Ads.txt sy Ads.cert nohazavaina.
Tags: fanamarinana dokafanomezan-dàlanahosoka amin'ny dokafanisana amin'ny dokaads.certads.txtIABjames hercherdokambarotra marani-tsaina
REMME: hanaisotra ny logins sy ny teny miafina ve i Blockchain?